ထင်ရှားသော မြန်မာဆေးလောက နိုင်ငံရေးသမားများ | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« အသံနဲ့ အမှန်၂၄
ဟိုရှေးအနှစ် ၂၀ ကျော်က (အဆုံး) »
ဒေါက်တာဆာစံစီပိုး (၁၈၇၀- ၁၉၄၆) M.D. (Albany), ဥပဒေပြုကောင်စီအမတ်၊ ဝှိုက်ကော်မတီဝင်၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ (၁၉၂၅)၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ်၊ ဂျပန်ခေတ်အတိုင်ပင်ခံလွှတ်တော်အမတ်
ဒေါက်တာဘရင် (၁၈၈၄- ၁၉၇..) M.B., Ch. B., (Edin.), ဝိုင်အမ်ဘီအေတည်ထောင်သူတဦးနှင့် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းအုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ပထမ မြန်မာမြို့တော်ဝန်၊ ဒိုင်အာခီခေတ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်
ဒေါက်တာသိန်းမောင် (၁၈၉၁- ၁၉၄၆) B.A. (Cal.), M.M.F. (Bengal); မြန်မာပြည် ဆေးဘွဲ့ရများအနက် ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကဆရာဝန်၊ သီပေါခေတ် အမြောက်ဝန်သမက် ၊ လတ်သခင်ယောက်ဖ၊ အမျိုးသားပညာရေးနှင့်ဆေးကောင်စီဝင်၊ ဥပဒေပြုအမတ်၊ ၂၁ ဦးပါတီ ဆော်သြသူ ၊လန်ဒန်မျက်နှာစုံညီဆွေးနွေးပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်(၁၉၃၁-၃၂)၊ အိန္ဒိယဥပဒေပြုအမတ် (၁၉၃၄)၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်၊ မြန်မာကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ် (၁၉၃၇-၃၉)၊ မြန်မာ့ဘေးနှင့်လူဝင်လူထွက်အရေး (၁၉၃၉)ရေး၊ ဂျပန်-မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအသင်း၊ ဂျပန်-မြန်မာကုန်သည်ကြီးများအသင်းအကျိုးဆောင်ဒါရိုက်တာ၊ ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်း ငါးပွင့်ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ် (၁၉၃၉)၊ ထိန်းသိမ်းခံရ (၁၉၄၀)၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး (၁၉၄၂-၄၄)၊ ပထမဆုံး ဂျပန်သံအမတ် (၁၉၄၄-၄၅) (ဂျပန်ကပြန်အပို့ သင်္ဘောပေါ်ဆုံးသည်)
ဗိုလ်မှူးကြီးစည်သူလှဟန် (ဗိုလ်လှသမိန်) (၁၉၁၈-၂၀၀၆) M.B.,B.S.; D.P.H (London), ဒုတိယသပိတ်ဖျာပုံခေါင်းဆောင်၊ ဆေးဝန်ထမ်းညွှန်ကြားရေးမှူး (ကာကွယ်ရေး) (၁၉၅၅)၊ အိမ်စောင့်အစိုးရ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘီပီအိုင်အထူးအရာရှိ၊ တက္ကသိုလ်များအဓိပတိ (၁၉၆၂-၆၄?)၊ တော်လှန်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး(၁၉၆၂-၇၄)နှင့် နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဟောင်း (ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၊ မဆလ)
ဒေါက်တာလှရွှေ (၁၉၁၄ – ၁၉၄၇) တတိယသပိတ်ကျောင်းသားအာဏာရှင်၊ ဗကသနှင့် တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ (အမေရိကန်မင်နီဆိုတာတွင် ခွဲစိတ်ပညာသင်အသွား ဘာရိန်းတွင် ရေယာဉ်ပျံပျက်ကျ၍ဆုံး) (ဗိုလ်လက်ျာညီ)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစန်းယု (၁၉၁၈-၁၉၉၆) တတိယသပိတ် ပြည်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်၊ ဆေးကျောင်းသား၊ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၊ ဘဏ္ဍာခွန်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးချုပ်၊ စစ်ဦးစီးချုပ်၊ သမ္မတဟောင်း၊ လမ်းစဉ်ပါတီအတွင်းရေးမှူးဟောင်း
ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင် (၁၉၂၀-၂၀၀၉) M.A. (ANU) ဆေးကျောင်းသား မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုလက်နက်သင်တန်းပေးသူ၊ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စစ်ပညာပါမောက္ခ (၁၉၅၈) ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ (၁၉၅၉)၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး (၁၉၅၉-၁၉၆၁)၊ သံအမတ်၊ သမိုင်းပြုစုသူ
ဗိုလ်မှူးကြီးဒေါက်တာမောင်လွင် (၁၉၁၉-၁၉၉၈) L.M.P. (Rgn.), D.T.M&H. (UK), ဒုစစ်ထောက်ချုပ်၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးတွဲဘက်အတွင်းဝန်၊ လူမှုဝန်ထမ်းနှင့်ကယ်ဆယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်း၊ ဖောင်ကြီးကျောင်းအုပ်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဟောင်း (ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၊ မဆလ) (ဒေါက်တာတောင်ကြီးယောက်ဖ)
ဒေါက်တာစိန်ဘန်း (၁၉၀၁ -၁၉၆၆) တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၁၉၅၀-၅၁)၊ လူမျိုးစုလွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၁၉၅၂-၅၆)၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး (၁၉၅၆-၅၈)
ဒေါက်တာစောလှထွန်း (၁၉၀၆- ၁၉၈၁) ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးကရင်ခေါင်းဆောင်၊ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဟောင်း
ဒေါက်တာကောင်းလှဖြူ (၁၉၂၉ မွေး) ၁၉၄၆-၄၇ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး၊ ကျောင်းသားသပိတ်ခေါင်းဆောင်၊ တပ်မှူး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး၊ တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး၊ မဆလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဒေါက်တာဆင်ဘိုး (သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းသမားတော်ကြီး၊ ရန်ကုန်ဆေး (၁) ကထိက၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့)
ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့် (၁၉၃၅မွေး) M.B.,B.S.; M.Sc (Comn; Med. Manchester), M.I.H.E (Manchester), F.R.S.H. (Lon); ကျန်းမာရေးပညာဌာန လ/ထညွှန်မှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါက်တာဉာဏ်ချစ် (ဗကပဆေးမှူးကြီး) ဦးအောင်သောင်း ဗမကဇော်မြင့်ဖေယောက်ဖ၊ ဗကပအပျက်တွင်ကျဆုံး
ဒေါက်တာမန်းမြင့်ဆိုင် (ကေအင်ယူဆေးမှူးချုပ်) မန်းဘခိုင်တူ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း မန်းဘဆိုင်သား
ဦးအောင်စောဦး ဒီချုပ်ဟောင်း၊ အမေရိက (သွား)
ကျော်ဝင်း (တောပြန်၊ အမြဲစိမ်း (မုံရွာ)၊ ဘာသာပြန်ဆရာ)
ဇာဂနာ (ဒေါက်တာသူရ) (သွား)
ဇော်ထွန်း (ဆေး ၂? ) (၈၈ ရန်ကုန်သပိတ်ကော်မတီ၊ နယ်စပ်ပျောက်ဆုံး)
ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း (ဒီချုပ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမားတော်)
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်(၉၀ လွှတ်တော်အမတ်၊ ဒီချုပ်၊ စင်ပြိုင်အစိုးရကိစ္စ နှစ်ရှည်အကျဉ်းကျခံရသူ)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (ဒေါက်တာစိန်ဝင်းညွန့်ပေါင်းအစိုးရဝန်ကြီး၊ အိန္ဒိယ)
ဒေါက်တာ စန်းအောင် (ဒေါက်တာစိန်ဝင်းညွန့်ပေါင်းအစိုးရဝန်ကြီးဟောင်း၊ သြစတြေးလျ )(သွား)
ဒေါက်တာသောင်းထွန်း (ဒေါက်တာစိန်ဝင်းညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ကုလကိုယ်စားလှယ်)
ဒေါက်တာနိုင်အောင် (အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း)
ဒေါက်တာဇော်ဦး Ph.D (American Uni.) အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ဟောင်း၊ အကဲခတ်၊ ဗဟုအဖွဲ့
ကိုအောင်သူငြိမ်း M.P.A. (Harvard) အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ဟောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကဲခတ်၊ ဗဟုအဖွဲ့
ကိုဝင်းမင်း M.P.A. (Harvard) အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ဟောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကဲခတ်၊ ဗဟုအဖွဲ့
ကိုဝင်းနိုင်ဦး (ကိုရင်မောင်) M.Sc (Development Studies) (London) အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ဟောင်း၊ လူ့ဘောင်သစ်ဟောင်း၊ ဘီဘီစီ
ကိုသံခဲ (အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ဥက္ကဋ္ဌ)
ဒေါက်တာမင်းလွင် (နရီမင်း) (အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ဟောင်း၊ အယ်ဒီတာ)
ကိုအောင်နိုင် (ဦးသန်းလွင်ထွန်း) (အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ဟောင်း၊ ဗီအိုအေမြန်မာဌာနမှူး)
ရော်နယ်လ်အောင်နိုင် ကျောင်းသား ၁၁၉ ဦးကော်မတီ (ဆေးတက္ကသိုလ်-လမ်းမတော်-၁၉၈၈)၊ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်မြောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌဟောင်း၊ သတင်းထောက်သင်တန်းဆရာ
ဒေါက်တာ မင်းသိမ်း ( အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်စစ်ကြောင်းတွင်အဖမ်းခံရပီး နဝတ ထောင်တွင်း သေဆုံး)
ဒေါက်တာမှုထန် (၁၉၉၀ အမတ်၊ အမျိုးသားညီလာခံကိုယ်စားလှယ်ကျော်၊ ယခုကြံ့ဖွံ့)
ဒေါက်တာစောမြအောင် M.B.,B.S. (Bom.); D.C.H. (Lond.); M.R.C.P. (Glas.); F.R.C.P.;( ဆေးဝါးဗေဒဌာနမှူး၊ ရန်ကုန်ဆေးပညာမဟာဌာန၊ မန္တလေးဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့် ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီး၊ ဆေးပညာဌာနမှူး၊ မန္တလေးဆေးပညာမဟာဌာန၊ ဆေး ၁ အချိန်ပိုင်းကထိက၊ စီအာရ်ပီပီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ၁၉၉၈)
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း (၉၀ အမတ်၊ ဒီချုပ်စီအီးစီဟောင်း၊ အန်ဒီအက်ဖ်ဥက္ကဋ္ဌ)
KIO ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာတူးဂျာ (သွား)
ဒေါက်တာနေဝင်းမောင် (မြန်မာအီးဂရက်စ်၊ ဗွိုက်စ်ဂျာနယ်)
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ (အယ်ဒီတာဟောင်း၊ နယ်စပ်ဘလောက်ဂါ)
ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်း (သွား) (ယူနီဆက်ဝန်ထမ်းဟောင်း၊ အကျဉ်းကျခံ၊ လော်ဘီနှင့်အန်ဂျီအိုသမား)
ခင်မမမျိုး (နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးရှင်၊ တက်ကြွသူ)
ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး (အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်) (သွား)
ဒေါက်တာအေးမောင် (ရခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်) (တိမွေးကု)
ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုး (မွန်စာ/ယဉ်၊ အငြိမ်းစားပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူး? ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ မွန်ပြည်နယ် လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး)
ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း (ဒုသမ္မတ၊ ရှမ်းစာ/ယဉ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကြံ့ဖွံ့)
12 Responses to “ထင်ရှားသော မြန်မာဆေးလောက နိုင်ငံရေးသမားများ”
1 Mr L on August 29, 2011 said:
How ‘s about Doctor Than Nyein (Ex-NLD, Now NDF Leader) ,
Dr Tin Myo Win ( i m not sure his name.., He is NLD member , ex-Prisoner, now family doctor of DASSK).
Your list is still not completed.
2 bobolansin on August 29, 2011 said:
Yes, it’s the first draft and needs to extend more. Thanks for addition, in fact, I am not aware much on current people. Thanks.
3 Zaw Min on August 30, 2011 said:
Let me add some more names. Dr. Myint Cho (X-ABSDF- now Aussie), Dr. Kyaw Thet Oo (X-ABSDF, now don’t know), Aung Thu Nyein (X-AB, now Vahu), Win Naing Oo (X-AB, now BBC), Aung Naing (X-AB, now Internews, Thailand), Dr. Aye Min (X-AB, now in US), Dr. Cinthia Maung (X-AB), Dr. Kyaw Nyunt (X-AB, now DAB), Dr. Singh (Deceased-KNU), Dr. Kyar Pan Nyo (KNU), Dr. Khin Sein (BMA), Dr. San Aung (Dental and MP, now Aussie), Dr. Tin Htut (Dental-MP, now Aussie), Ko Khun Sai (X-political prisoner-now UK), Win Min (2nd MB, X-AB, now US), if I get more names, I will send you them again. Zaw Min
4 bobolansin on August 30, 2011 said:
Thanks so much Ulay! I will try to add more. Also U WNO gives mealist.
5 ခင်မင်းဇော် on August 31, 2011 said:
ဆေးတက္ကသိုလ်ပြီးရင် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလဲ စာရင်းပြုစုပေးပါဦး။
6 bobolansin on August 31, 2011 said:
နီးစပ်တဲ့သူတွေ လုပ်ပါစေအမကြီး) ဒီစာရင်းလည်းမပီးသေး
7 Naing Naing on September 2, 2011 said:
Dr. Aye Kyaw (Dentist) vice chair NLD-LA
Dr.Maran Tu Ja (Dentist) KIO
8 bobolansin on September 3, 2011 said:
9 Naing Naing on September 2, 2011 said:
Dr.Rodin Nga (Veterinary)
10 bobolansin on September 3, 2011 said:
တူးဂျာက ဘုန်းကြီးထင်နေတား) ကျေးဇူး
11 စောသက်လင်း on September 8, 2011 said:
အမရပူရက NLD ဆရာဝန် တစ်ယောက်ရှိတယ်ထင်တယ်။ နှစ်ရှည်သမားတစ်ဦးပဲ။ အခုတော့ နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်။ နာမည်မေ့နေလို့။ သူ့အမျိုးသမီးလည်း ဆရာဝန်လေ။
12 bobolansin on September 8, 2011 said:
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်(၉၀ လွှတ်တော်အမတ်၊ ဒီချုပ်၊ စင်ပြိုင်အစိုးရကိစ္စ နှစ်ရှည်အကျဉ်းကျခံရသူ).. sorry I need to mention his constituency. 🙂